Xaaladda SEO ma baadhi kartaa aaladaha suuq geynta?
Sida ku xusan tirakoobyada, in ka badan 90% macaamiisha ayaa doorbidaya in fariin warbaahineed ay u eg tahay sheeko. Waxaa la xaqiijiyay in sheeko qosol leh ay ka caawiso dadka inay fahmaan arrin gaar ah. Ma jirto wax diidaya in xataa dadka qaangaarka ahi dareemaan cirifka gargaarka marka qof waliba si farxad leh u noolaado.
Daraasad daraasad SEO ah waa qalab suuq weyn. Maanta, khubarada Semtalku waxay kuu sheegi doonaan wax badan oo ku saabsan xalkan soo socda. Ka dib markaad akhriso maqaalka, waxaad ogaan doontaa sida aad u adeegsan karto daraasadaha kiisaska suuqa ganacsigaaga. Daraasadda Xaaladda Waxbarashada
Xaaladda daraasaddu waa qalab xooggan oo kaa caawin kara inaad sii balaariso dhibaatada macmiilka adoo sharxaya sida ganacsigaaga wax uga qaban karo baahiyahaaga macaamiisha.
. Daraasadda kiisku waa xulasho fiican oo loogu talagalay mulkiilayaasha bogagga kuwaas oo ujeedadooda koowaad tahay inay dadka ka iibsadaan alaabta iyo adeegyadooda. Maxay sameeyaan daraasadaha kiisaska gaarka ah sidaa daraadeed waa habka ay u isticmaalaan sheekooyinka sheekooyin macluumaad ku saabsan ganacsigaaga.
Maxay tahay Sababta Muhiimka ah ee loo Isticmaalo Daraasadda Case ee SEO?
Daraasada Case Study SEO waa qalab wax ku ool ah oo loogu talagalay faafinta .
Si kastaba ha noqotee, waad sii wadi kartaa oo aad u gudbin kartaa wargeyska maxaliga ah ama majaladda si aad u soo jiito macaamiisha aad u badan. Qiime kale oo weyn oo lagu dhisi karo sumcaddaada waa in aad soo bandhigto daraasaddaada kobcinta khayraadyada loo qoondeeyay ganacsigaaga.
Sidoo kale, tixgeliyaan kooxaha shirkadaha gaarka ah ee LinkedIn. Way fiican yihiin inay la wadaagaan waayo-aragnimadaada aadanaha kale. Sida hadalku u socdo, wadaaggu waa daryeeli. Ka dhig dadka inay dareemaan gaar ah iyagoo siinaya macluumaad bilaash ah oo faa'iido leh.
Waxaad si xor ah u daabici kartaa barashada keeskaaga ee LinkedIn Pulse. Mashruucaan boggaan wuxuu u oggolaanayaa dadka isticmaala inay daabacaan maqaallo kale oo markaa la wadaagi karo. Mid ka mid ah fikrad weyn oo aad u leedahay SEO-gaaga ayaa ah inaad dib-u-habeyn ku sameyso daraasadda kiis-hawleedka ee ku-soo-boodo soo-bandhigista wargeyska ama ku-soo-bandhigid fara badan. Ka dib markaad dhammaysato, waxaad ku wadaagi kartaa xisaabaadkaaga warbaahinta bulshada.
Waxa kale oo lagama maarmaan ah inaad xusuusatid in aad u isticmaali karto daraasaddaada kiisaska macluumaadka macluumaadka si loogu diro macaamiisha mustaqbalka iyo kuwa hadda jira.
Qaab-dhismeedka Daraasadda Case Study SEO
Fikrad ahaan, daraasaddaada kiiskuna waa inuu leeyahay bilowga, dhexe, iyo dhammaadka. Maskaxda ku hay, in daraasaddan kiiskani caadi ahaan aad u dheer tahay oo ka badan qiyaastii sheekooyin madadaalo ah. Sidaa darteed, qorshaha habboon waa furaha. Marka xigta ee aad diyaarinayso daraasadda kiiska, waxaad hubisaa inay ka mid tahay qaybaha soo socda:
Magaca gaaban iyo mid la qabsaday;
Inay si qotodheer ah u eegaan dhibaatada macmiilka mustaqbalka;
Faahfaahin sida ganacsigaaga wax uga qabanayo arrimaha macaamilka;
Caddayn muujinaya sida adeeggaaga ama sheygaagu u caawiyay macmiilka;
Wicid ficil ku saabsan dib u noqoshada alaabtaada ama adeeggaaga.
Waa adiga kugu habboon qaabka aad u dooran lahayd markaad sameysid kiis daraasad. Waxa muhiim ah in la xusuusto waa in daraasaddaada kiisku ay tahay inay abuurto sheeko ku saabsan arrinka si loo xalliyo dhammaadka. Si loo soo koobo, daraasadda kiisku waa qalab awood badan oo ku hagaajin kara SEO-gaaga siyaabo kala duwan
. Caawimaadda daraasaddu waxay soo jiidataa macaamiisha mustaqbalka leh iyagoo siinaya si qotodheer u eegaya waxa ay u shaqeyneyso adeeggaaga ama sheygaaga.
Hambalyo! Hadda waxaad taqaanaa asaaska aasaasiga ah ee daraasadda kiisaska. Laga yaabe, waa waqti aad u sheegto sheeko gaar ah Source .